Halkee Playstation 4 Waayo, Christmas?
1. Fikradaha Christmas Gift
1.Christmas Gift Fikradaha
2.1 Salaan Cards
2.3 Free Movies
3.1 Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
4.2 dhaceen Cards
5. Qaar kale
Ma waxaad u doonaya inuu qabto Playstation 4 waayo, kanu Christmas soo socda? Ama laga yaabaa in aad jeclaan lahayd in ay ka hor-si PS4 ah kuwa aad jeceshahay? Maaddaama ay dalabaadka sare, 4 PlayStation iibiyey in ka badan 1 milyan oo ah 24-ka saac ee hore ee bilaabay gudahood! Waxay ahayd kaliya ee suuqa tan iyo markii jimcihii la soo dhaafay (15-kii November ee kaliya ee North America) laakiin inta badan dukaamada tafaariiqda iyo dukaamada ayaa ka baxay stock. The Playstation 4 ee taariikhda sii daayo inta ka dhiman dalalka caalamka oo dhan ayaa la qorsheeyey 29-ka November ee (sidoo kale maalin jimce ah). Sidaas, waxaad si fiican u degdegay ilaa! Waxaad ka heli kartaa talooyin si aad u iibsato Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah halkan .
Halkee Pre-si PS4 ah?
Playstation 4 xidhmo
Details Playstation 4 '.
Carar warbixiyay Sidaas Far
2013 Best Holiday kulan PlayStation 4
Habka ugu fiican dabcan waa in ay meel aad si toos ah ula Sony ama wax kasta oo ku tiilay deegaanka. Haddii kale, ka hor si aad PS4 ka GameStop , Walmart , Best Buy ama Alaabta "R" Us . Xilligan la joogo aad, Sony iyo Alaabta R Us kaliya leeyihiin kaydka ka tagay meesha inta kale waxaa ku calaamadsan ah "ku meel gaar ah ka soo biqli" ama "iibiyay" calaamad. Si kastaba ha ahaatee, waa ammaan haddii aad u soo wici kartaa si double-jeeg sida mararka qaarkood internetka ee laga yaabo in aan la casriyeeyay oo wakhtiga si ay u muujiyaan isbeddelka saamiyada ama helitaanka.
Isku day inaad wadid oo ka fog goobaha xaraashka sida Arbacada ah ama iibeyey Internet waaweyn ee, Amazon haddii aad diyaar u tahay inay bixiso qiimo sare ku tahay. Waxaan kaliya qaaday kana dayi wax si degdeg ah oo ay tahay iibka qiimo yar oo ah $ 600. Waa la aamini karin! Sidaas oo ay tahayna, haddii aadan ku cusub tahay goobta ciyaaraha ka, taasi waa arrin arrin mar kasta Console cusub uu bilaabay. Tani waxa ay si isku mid ah ay wajhi Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, kaas oo la qorsheeyay u noqon badan oo dunida ku sii daayo 22-ka November . Garo waa maxay? Waa Friday aad u!
Nidaamka Playstation 4 ama Console lafteeda waxa jaban ee $399.99, laakiin waxaad had iyo jeer karaa hubi dalabyo ka xidhmada . Qaar ka mid ah xidhmo dhab ahaantii laga yaabaa in xubnuhu Console ka PS4 la Camera PS4 ah (oo qiimihiisu yahay $59.99, haddii si gaar ah u iibin jireen), xulashada kulan ee ugu fiicnaa iibinta (sida dagaalka, Call of Duty ama shirqool ee Caqiido) ama qalab kale.
Dhab ahaantii, dib u eegista sameeyo Dufcaddii ugu horeysay ee milkiilayaasha PS4 ee uma muuqato in ay aad u cajiib ah. Weliba, waxaa lagu si buuxda u fahmi karaa in arrinka ugu badan ka dib, waxay u badan tahay in badan oo dheeraad ah filaya ka Console qarnigan video kulankii 8aad ka Sony. In PS4 ah, waa la ogaan karo in ay jiraan ku dhawaad ​​ma jiro ama meel u dhow AAN macquul ah oo waafaqsan ka gadaal. Taasi waxay ka dhigan tahay wax aan macquul aheyn in muddo ah u ciyaaro disc PS3 ama kulanka PS4 ah. Haddii, in "jawi kudayasho" sida ay tahay Shuhei Yoshida (Madaxweynaha Sony Worldwide Studios).
Dhinaca kale, ay khadkeeda ama dhawaansho PS4 in ay iyagoo Console video ama PC ay awood geeyo wanaagsanaaday (foomka ee Chine bixi karo), browser iyo sidoo kale adeegyada bulshada iyo wadaaga online (iyada oo Button Share The) . In kooban, Playstation 4 qoreysa ee sooca ah ee soo socda:
8 Tuulo processor ("Jaguar" x86-64 AMD) la 8GB xasuusta gudaha (GDDR5)
500GB ah meel lagu kaydiyo oo la drive saari adag
Drive indhaha u Blu-Ray iyo DVD
USB 3.0 (2 dekedaha)
Taageerada kaydinta Cloud
Fiiri wixii faahfaahin dheeraad ah oo HALKAN .
Fiiro gaar ah : Waxaad doonaa si ay kor firmware ka hor inta aanad si dhab ah loo bilaabi karo ciyaaro la!
Jaqayo Continuous iftiinka buluug ah Console dhabta ah
Aadan awoodin in ay ku xidhmaan TV-ga; Cable aan shaqayn HDMI
Qaabab file in aynan u playbacks video
Hanuuniyaa Dhibaatooyinka ku bixiyeen ka Sony waa in la hubiyo in Console la "si fiican u fadhida" ama in ay ka fogaadaan xiriir dabacsan oo keentay in xiriir uu ku fashilmay in ay TV-ga. Sida xal u dhacdo buluug laydhka, waxaa lagula taliyaa in ay dami Console adiga oo riixaya hoos ku batoonka todobo ilbiriqsi. Si la moodo ama Radidiyaha aad video files on Playstation 4, waxaad isku dayi kartaa soo Wondershare Video Converter Ultimate .
2014 Best Holiday kulan PlayStation 4
Waxaad si fudud u fiirin kartaa labada GameTrailers ama IGN Adduunka . U yeelan doontaa in ay akhriyaan iyada oo dib u eegista, qiimaha, waafaqid, updates iyo wax ka badan in aad.
Shirqoolka Caqiido IV: Black Flag
Call dafirtay Duty
Fall KillZone Shadow
Lego la yaabin Super Heroes
Ma u baahan tahay u Speed: kooxaha
Skylanders: Force isku bedelasho
Haddii aad rabtaa in aad kulan kale oo aad saaxiibo for this Christmas soo socda, inaad si fiican u hubiyo in ay socon u consoles'ka ay. Ma ka akhri iyada oo Top 20 Best-Iibinta Game horyaal u consoles'ka Your . Waxay ku siin doonaa fikrad fiican oo consoles'ka aad yeelan doontaa in ay iyaga ciyaaro.
Sida loo qabsaday Screenshot A on PS4
Sida loo Edit Videos duubay PS4
Top 20 Youtube Injiil video
4 wmv (Windows Media Video) Codecs iyo plugins
Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si wmv
Sida loo Edit Mpg Files
Sida loo dar Logo in Video si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Halkee Playstation 4 Waayo, Christmas?